Raw Caffeic acid phenethyl ester powder ndiyo phenethyl alcohol ester ye caffeic acid uye bioactive ......
Raw Caffeic acid phenethyl ester powder (104594-70-9) Specifications
Product Name Raw Caffeic acid phenethyl ester powder
Kemikari Name Raw Caffeic acid phenethyl ester powder;
Phenylethyl caffeate; Phenethyl caffeate; Caffeic acid 2-phenylethyl ester; β-Phenylethyl caffeate;
Kirasi yeMishonga Tyrosine Kinase Inhibitors, Inhibitors
Molecular Wsere 284.311 g / mol
Kunyorera Point 125-126ºC (dec.)
Kubikira pfungwa 498.6 ± 45.0 ° C pa 760 mmHg
Biological Half-Life Hapana Data Iripo
Skukodzera Sungunuka mu ethyl acetate pa 50mg / ml. Inogadziriswa muDMSO uye ethanol.
Storage Temperature Chengeta pa 0 ° C
Raw Caffeic acid phenethyl ester powder APane Cytotoxic mutevedzeri kurwisa kenza mitsetse. Inhibitor ye ornithine decarboxylase uye proteine ​​tyrosine kinase. Yakawanikwa iine inhibitor chaiyo yezvinyorwa zvinyorwa zvinyorwa, NF-kB. Iyo yakaratidzawo kuti inonyanyisa kubvisa lipoxygenase nzira ye arachidonic acid metabolism panguva yekuputika.
Raw Caffeic acid phenethyl ester powder (104594-70-9) Tsanangudzo
Raw Caffeic acid ye phenethyl ester powder ndiyo phenethyl alcohol ester ye caffeic acid uye bioactive chikamu cheuchi hive propolis, ine antineoplastic, cytoprotective uye immunomodulating mabasa. Pamusoro pehutungamiri, Raw Caffeic acid inonzi phenethyl ester powder (CAPE) inhibits kushandiswa kwenyukliya kudhindisa chinhu NF-kappa B uye inogona kudzivisa p70S6K uye Akt-inotungamirirwa nzira dzekutaridza. Mukuwedzera, CAPE inhibisa PDGF-inokonzera kupararira kwemasero matsvuku anoshungurudza masero kuburikidza nekushandiswa kweP38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) uye hypoxia-inducible factor (HIF) -1alpha uye inotevera induction ye heme oxygenase-1 (HO-1) .
Caffeic acid phenethyl ester yakave ichinzi ine anti-carcinogenic, anti-inflammatory, uye immunomodulatory properties. CAPE inodzivisa HIV-1 integrase. Zvirwere zvinopesana nehutukuta zvakambofungidzirwa kuti zvinokonzerwa nekudzingwa kweipoxygenase nzira ye arachidonic acid metabolism neCAPE. Dzidzo dzakaratidzawo kuti CAPE inonyanya uye yakasimba inhibitor yekushandiswa kwekushandisa nyukliya kudhinda NF kappa B, iyo inonzi protein yakaoma inodzora kudhindwa kweDNA. Caffeic Acid Phenethylester inhibitor ye ODC uye Tyrosine Kinase
Caffeic acid phosethyl ester powder (104594-70-9) Mechanism of Action
Caffeic acid phenethyl ester inosanganisira propolis ye mikoko yeuchi, inovhara NF-κB kushandiswa kunokonzerwa ne-phorbol ester, ceramide, okadaic acid, uye hydrogen peroxide nekudzivirira kuendeswa kwepasi peP65 subunit yaNF-κB kumusana. Mune mutsara wemakumbo esero, line reCaffeic acid phenethyl ester rinoratidzira basa rinopesana nemapurisa ne EC50 ye1.76, 3.16, 13.7, uye 44.0 μM kurwisa murine colon 26-L5, murine B16-BL6 melanoma, HT-1080 fibrosarcoma uye mapapu evanhu A549 adenocarcinoma cell cell, maererano. Caffeic acid phosethyl ester, seyakanyanya antioxyidant, inoshandisa anti-apoptotic yake mu cerebellar granule masero nekuvhara ROS nekudzivirira uye kubvisa basa repaspase. Uyezve, Caffeic acid phenethyl ester inodzivirira pro-inflammatory phenotype yeLPS-yakasimudzirwa HSC, uye LPS-inoita kukurudzirwa kweHSC kune fibrogenic cytokines nekudzivisa NF-κB kuisa.
Mu vivo, Caffeic acid phenethyl ester (10 mg / kg, ip) inhibits kukura uye angiogenesis yemakumbo ekutanga muC57BL / 6 uye BALB / c mice inoculated na Lewis lung carcinoma, colon carcinoma, uye maselanoma masero. Caffeic acid phosethyl ester (5, 10, 20 mg / kg) inoratidzawo maitiro ekudzivirira zvirwere mu vivo nekuderedza thymus uremu uye / kana cellularity ye thymus uye spleen.
Kushandiswa kweCaffeic acid phenethyl ester powder (104594-70-9)
▪ Zvisizvo zvinopisa
kubatsira Caffeic acid phosethyl ester powder (104594-70-9)
Phenethyl caffeate ishizha rinowanika mupropolis, musanganiswa unogadzirwa nenyuchi. Caffeic acid phosethyl ester (CAPE) inogona kushanda mukudzivirira uye kurapwa kwezvirwere zvinopisa zvinosanganisira rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus uye psoriasis, kanzira dzakasiyana-siyana uye zvirwere zvinosanganisira kuora mutezo, cataract, nezvimwe zvirwere zvinokonzerwa nekushungurudzika kwehutano. Uyezve, CAPE inogona kushandiswa kurapa hutachiona hweHIV kana yakabatanidzwa mune mishonga yemishonga ine chinhu chinodzivisa kudzokorora kweHIV. Inogonawo kushandiswa kurwisa-atherosclerotic, antioxidative, cardioprotective, anti-obesity uye antimitogenic.